२०७६ पौष ११ शुक्रबार ०६:३५:०० प्रकाशित
स्वास्थ्य क्षेत्रको तयारीबिना भ्रमण वर्ष सफल हुन गाह्रो छ। सरकारले भ्रमण वर्षको तयारी गरिरहेको हामीले समाचारबाट थाहा पाउनुपर्छ। खास कुरा के हो भने अहिलेसम्म तयारी भएकै छैन। लोकप्रियताका लागि घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। त्यसका लागि तयारी पनि सुरुबाटै गर्नुपर्छ। त्यसमा स्वास्थ्यको तयारी त पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने हो। तर सरकारले यो विषयमा सोचेको छैन।
फेक रेस्क्युले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बदनाम भइरहेको समयमा स्वास्थ्यमा बिनातयारी भ्रमण वर्ष सफल बनाउन गाह्रो पर्छ। त्यसको असर दीर्घकालीन रुपमा देखिन्छ।
पछिल्लो समय केही पर्यटन व्यवसायी, केही पर्यटक र अस्पतालले स्वास्थ्य उपचार गर्ने बहानामा पयर्टकमाथि गरेको शोषणले राष्ट्र बदनाम भएको छ। तर उनीहरु कारबाही गर्नुको साटो सरकारी तहबाटै संरक्षण गरिएको दुखद पक्ष छ।
खासगरी हिमाली यात्रामा जाने पर्यटकहरुलाई खाना, हाई अल्टिच्युडको समस्या धेरै हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणमा भएपछि इन्फरमेसन सेन्टरमा स्वास्थ्यको जानकारी दिने पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ।
पर्यटक अलि विकट ठाउँतिर गए भने सिटामोलसमेत नपाइने स्थिति छ। देशमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवा लिँदाको शुल्क तोकिएको अवस्था छैन। हामीले कतिसम्म भेटेका छौँ भने रेस्क्यु गरी ल्याइएका पर्यटकलाई डाक्टर भिजिट शुल्क नै २५ सय डलरसम्म लिइएको छ। पढेलेखेका डाक्टर, अस्पताल सञ्चालकले रातारात एकै व्यक्तिबाट उपचारका नाममा लुटेर खानु निकै लाजमर्दो कुरा हो।
जुन कुरा सरकारलाई थाहा छ। तर कारबाही गर्दैन। सरकारले चाहने हो भने यस्ता विकृति धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मैले पर्यटन मन्त्रालयको मिटिङमा पटकपटक स्वास्थ्य सेवाको तयारी नभई लक्ष्य सफल नहुने कुरा पटकपटक उठाएको छु। तर, यतातिर ध्यान गएकै छैन। हामीकहाँ कुनै मेला–पर्व हुन लाग्यो वा पशुपतिमै कुनै पर्व प¥यो भने त स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिन्छ, यो त ठूलो आयोजना हो। यसमा स्वास्थ्यको तयारी निकै अघिदेखि हुनुपथ्र्यो। तर केही भएको छैन।
भम्रण वर्ष मार्केटिङको समय हो। यहाँ आएका पर्यटकले राम्रो सत्कार, सेवा पाए भने फर्केर आफ्नो देशमा प्रचार गर्छन्।
-(नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष लामासँगको कुराकानीमा आधारित)
७. कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यक स्वस्थ र सन्तुलित आहार
८. ३ सय ५१ कोरोना संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत